Mbupu ppinggbọala Site na sauran Worldwa gaa UK | Importgbọ M Mbubata
Mbupu ppinggbọala Site na sauran Worldwa gaa UK
Cargbọ M abanyela na ụlọ ọrụ mbubata ụgbọ ala na UK maka afọ 25 gara aga. Ebumnuche anyị dị ka ụlọ ọrụ bụ ịnye ndị ahịa na-ebubata ụgbọ ala na UK ụzọ dị mfe maka ịnwe usoro ahụ n'onwe ha.
Anyị ewulitela azụmaahịa anyị n'ịghọta na atụmanya mbubata ụgbọ ala na UK nwere ike isiri ndị mmadụ na -abịakwute ya na nke mbụ ike. Anyị maara na ozi zuru ezu achọrọ iji mee mkpebi ịbubata ụgbọ ala na UK na-adịkarị ebe niile ma sie ike mgbaze yabụ anyị bịara ebe a iji nyere aka ma bụrụ isi mmalite gị.
Anyị kwenyere na site na itinye mbubata ụgbọ ala m na mbubata ụgbọ ala gị, ị ga-enwe ike ịnọdụ ala ma zuru ike ka anyị na-eji azụmahịa anyị zuru ụwa ọnụ na netwọkụ azụmaahịa, ihe ọmụma ụlọ ọrụ na akụrụngwa nnwale UK iji mee ka gị na ụgbọ ala gị laghachi ngwa ngwa. okporo ụzọ ebe a na UK.
Olee Ebe Anyị Pụrụ Isi Bupu?
Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu n'ibupu ụgbọ ala si n'ọtụtụ mba dị iche iche gburugburu ụwa. Ị nwere ike chọtakwuo gbasara usoro mbubata kpọmkwem site na ụfọdụ ebe anyị kacha ewu ewu na gburugburu ụwa site na ịpị gaa n'otu ibe dị mkpa dị n'okpuru.
Uru dị na ịhọrọ ụgbọ ala Mbubata ibubata ụgbọ ala gị site na mpụga EU ma ọ bụ USA na UK bụ:
Ndị otu mpaghara raara onwe ha nye na obodo gị ịnata ụgbọ ala ma hazie mwepụ mbupụ
Mpempe ma ọ bụ Roll na Roll na nhọrọ mbupu si n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ
Idozi omenala ndị UK
Nkwadebe ule ụgbọ ala na ọkọlọtọ IVA
Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ akwadoro na saịtị IVA na ule MOT
Ngwa ngwa DVLA debanye aha site na njikwa akaụntụ anyị raara onwe ya nye
Nyefee ụlọ ma ọ bụrụ na achọrọ